नभेटिएकै हो देउवा, ओली र प्रचण्डको विकल्प ? | Himalaya Post
नभेटिएकै हो देउवा, ओली र प्रचण्डको विकल्प ?
Posted by Himalaya Post | ९ मंसिर २०७८, बिहीबार १९:१५ |
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भारी मतले निर्वाचित भएको खबर अनलाइन मिडियामा भंगेरे होइन गिद्धे अक्षरमै प्रकाशित भएको छ । अहो ! कत्रो ठूलो समाचार । मानौं, सभापति देउवाले डडेल्धुरातिरको चट्टाने भीरमै चढेर शिलाजित संकलन गरेका हुन् ।
देउवा पत्नी डा. आरजु राणा महाविधेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएको खबर पनि करिबकरिब भाइरल छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरु विधान बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने जान्दाजान्दै देउवा दम्पती महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको खबर महत्वका साथ प्रकाशित हुनुको अर्थ के ? के उनीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने स्थितिसमेत नभएका कमजोर पात्र हुन् ? त्यसैले महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर तिनले बाजी मारे भन्ने अर्थमा यो समाचार आएको हो ?
जे होस्, हाम्रा नेताहरुले अचेल यो देशमा समाचार नै बनाउनुपर्ने स्तरको कुनै युगान्तकारी काम त गर्न सकेका छैनन् । मिडियालाई समाचार चाहिन्छ, त्यसैले तिनले शीर्ष नेता र तिनका पत्नीसमेतका झिना मसिना गतिविधिलाई शीर्षक समाचार बनाउनु कुनै अनौठो हैन । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा यसपाली पनि शेरबहादुर देउवा नै सभापति चुनिनेमा अब शंका रहेन । देउवा इतर भन्दै सभापतिमा दाबी गरिरहेका नेताहरु आपसमै विभाजित छन् । कसले कतिबेला कता कित्ता बदल्छ, त्यो निश्चित छैन ।
देउवालाई चुनौती दिँदै सभापतिको दाबी गरिरहेकाहरुको अनुहार नियालौं । विमलेन्द्र नीधि पिता महेन्द्रनारायण नीधिको उत्तराधिकारीको आधारमा कांग्रेस राजनीतिमा हुर्र्किएका हुन् । मधेशको सेन्टिमेन्ट यिनको साथमा छ । तर, समग्र कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने हिसाबको व्यक्तित्व यिनको अझै निर्माण भइसकेको छैन । विपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवापछि यही स्तरको उच्च व्यक्तित्व निधि होइनन् । यसो भनौं, उनी पार्टीभित्रका विभिन्न गुटलाई समन्वय गरेर लैजानसक्ने निर्विकल्प र सर्वसम्मत उम्मेदवार होइनन् ।
अब शशांक कोइरालाको कुरा गरौं । पहिलो त उनको जिवनशैली सौखीन छ, जसले गर्दा पार्टीमा अहोरात्र खट्न उनी समर्थ छैनन् । जननेता विपी कोइरालाको पुत्र हुनु मात्र आजको कांग्रेसमा कुनै विशेषता हैन । विपीको उत्तराधिकारी बोक्ने हो भने विपीको विचार, चिन्तन, चेतना र प्रतिभाको ओज पनि त हुनुपर्छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछिको खुला परिवेशमा मात्र उनी कांग्रेसको राजनीतिमा ह्वात्तै चर्चामा आएका हुन् । नेत्र विशेषज्ञ डा. साबले कोइराला परिवारको उत्तराधिकारी दाबी गर्न सक्छन् । तर, कांग्रेसमा अहिले देउवाको विकल्प खोजिएको हो । देउवाको विकल्प हुनसक्ने व्यक्तित्व चाहिँ डा. शशांकको पनि निर्माण भइसकको छैन ।
सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहको राजनीतिको आधार भनेको काठमाडौं हो । उनी उपत्यकाका निर्विकल्प नेता हुन् । खाँटी कांग्रेसमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुण उनमा छ । तर, समग्र देशभरिका कांग्रेस नेता–कार्यकर्तालाई समेटेर नेतृत्व दिने मामिलामा उनमा पनि पूर्णता छैन । मान्छे इमानदार र हकी स्वभावका छन् । मनमा लागेको प्वाक्कै बोली हाल्छन् । वाणीमा संयम धारण नगर्ने भएकाले प्रकाशमान आफ्नै भनाइबाट विवादमा पनि आउने गर्छन् ।
बेलाबेलामा गणेशमान सिंहको उत्तराधिकारीको चर्चा गर्ने गरेकाले उनलाई परिवारवादको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यसैगरी वैचारिक र कार्यक्रमिक दिशा दिनसक्ने वौद्धिक क्षमता पनि उनमा प्रखर देखिँदैन । अतः प्रकाशमान सभापति हुने संभावना यो महाधिवेशनमा देखिँदैन ।
केही समय यता डा. शेखर कोइरालाले आफूलाई वैचारिक, सांगठनिक र सबैलाई मिलाएर लैजानसक्ने क्षमता देखाएकै हुन् । तर, उनको अपूर्णता के हो भने कांग्रेसमा उनको पृष्ठभूमि धेरै लामो छैन । सभापतिको हाकाहाकी दाबी नगरेका अर्जुन नरसिंह केसीभन्दा डा. शेखर पार्टीमा कनिष्ट नै हुन् । उनी पनि कोइराला परिवारकै उत्तराधिकारीको भरमा सभापतिको दाबी गर्दैछन् ।
हो, देउवा इतरलाई एकढिक्का बनाउन सकेको खण्डमा उनको संभावना बढ्न सक्छ । तर, उनमा पनि वैचारिक चेत र ‘करिश्म्याटीक’ व्यक्तित्वको अभाव छ । उदाहरणका लागि गगन थापा या विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेतामा जुन ‘करिस्म्याटीक’ र मासलाई जुरुक्क उचाल्नसक्ने क्षमता छ, त्यो डा. शेखरमा छैन । कम्युनिष्ट ‘करीश्म्याटीक’ दबदबा भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक दलको सभापतिमा यदि विपी, किसुनजी या गिरिजाबाबुमा जस्तो मास प्रभावित गर्नसक्ने क्षमता भएन भने, कांग्रेसको नेतृत्व रुखो हुनजान्छ ।
भारतमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निष्क्रिय र शिथिल व्यक्तित्वले कांग्रेस आइलाई ठूलो क्षति भएको निकट अतितको उदाहरण काफी छ । त्यहाँ नरेन्द्र मोदीजस्ता नेताको ओजपूर्ण भाषण र सम्मोहक शक्तिले नै भाजपालाई दुईदुई पटक बहुमत दिलाएको हो । डा. शेखरमा यसखालको ओजपूर्ण भाषण शैली र सम्मोहन क्षमता देखिँदैन । कम्युनिष्ट दबदबालाई चिर्नसक्ने आक्रामक र ओजपूर्ण व्यक्तित्व नभएकाले नयाँ युगको नयाँ नेतृत्वमा डा. शेखरको अनुहार के कति फिट होला, भन्न सकिन्न ।
विपी कोइरालाकै पालादेखि कांग्रेसमा होमिएका रामचन्द्र पौडेल पार्टीभित्र सर्वसम्मत छैनन् । तनहुँको राजनीतिमै अ्िरल्झएका पौडेलले राष्ट्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण गर्ने सकेनन् । विपी, किसुनजी र गिरिजाबाबुपछि खासमा पौडेलले नै कांग्रेस हाँक्नुपर्ने हो, तर झिना मसिना स्वार्थ र साँघुरो घेरामा रमाएकाले उनले सबैलाई समेटने खालको व्यक्तित्व निर्माण नै गर्न सकेनन् ।
गोविन्दराज जोशीजस्ता आफ्नै जिल्लाका नेतालाई समेत रिझाउन नसकेर झगडा गरिरहने पौडेलले आसन्न संकट र चुनौतीबाट पार्टी र मुलुकलाई समेत बचाउँदै अघि बढाउनसक्ने क्षमता देखाएनन् । न त उनको आफ्नै कुनै गुट बन्यो, न उनी कुनै गुटमा अट्न सके । पौडेल ठिंग उभिएको एउटा भिमकाय व्यक्ति त हुन्, तर उनका पछाडि लाग्नेहरु धेरै कम छन् । यसो भनौं, पौडेललाई सभापति नचाहनेहरुको संख्या पार्टीमा ठूलो छ ।
यस्तो परिस्थितिमा घुमीफिरी नेपाली कांग्रेसमा फेरी पनि सभापति हुने भनेको देउवा नै हो । नेपाली समाज सत्ता र शक्तिकै पछि दगुर्छ । प्रधानमन्त्री वरिपरी अनेक स्वार्थले पार्टीको तप्का झुम्मिएकै छ । सुजाता कोइरालाजस्ता कोइराला परिवारकै हस्तीहरु देउवाको पक्षमा लागिसकेका छन् । विश्वप्रकाश शर्मा पनि उतै छन् । मिनेन्द्र रिजालदेखि बालकृष्ण खाँडसम्म देउवाकै पक्षमा छन् । डा. नारायण खडकाले परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा देउवाको पक्षमै अन्तर्राष्ट्रिय माहौल बनाउन माथापिच्ची गरिरहकै छन् । शक्ति केन्द्रहरुलाई पनि देउवाजस्ता उदार र लचिलो नेताबाट काम लिन सकिने विश्वास छ ।
देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र हैन, सभापति दोहोरिए पनि आम जनतालाई भने यो कागलाई बेल पाके बराबर हो । नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचारबिना सम्पन्न हुने महाधिवेशन फगत एउटा औपचारिक, प्राविधिक र आवधिक कर्मकाण्डबाहेक केही हुनेछैन । कांग्रेस पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै हुनेछ, महाधिवेशनपछि पनि । न त यसमा नयाँ उर्जा भरिनेछ, न यो आसन्न सँकट समाधान गर्ने हिसाबले रुपान्तरित हुनेछ ।
एमालेबाट झन के आश गर्ने ?
नेकपा (एमाले)को केही दिनमै हुन लागेको दशौं महाधिवेशनबाट त झन के आशा गर्नु ? अध्यक्षमा केपी ओलीले नै निरन्तरता पाउने छन् भने नवौं महाधिवेशनले पारित गरेका विचार र सिद्धान्तकै निरन्तरताबाहेक नयाँ केही आउनेवाला छैन । अध्यक्ष ओली र उनका बफादारहरुको एकल हैकममा चलिरहेको एमालेको यो महाधिवेशन ‘ओलीको गुटगत भेला’ न हो ।
अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिनसक्ने पक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एस) बनाएर पार्टीबाट अलग भइसकेको छ । पार्टीभित्रै रहेर ओलीका निर्णयमाथि असन्तुष्टी जनाइरहेका घनश्याम भुषाल र भीम रावलहरुको समूह चाहिँ निरिह र लाचार देखिन्छ । भनेपछि ओलीकै हालीमुहाली हुने नै भो ।
ओली कस्ता नेता हुन् भने उनी अहिले हरेक मोर्चामा हारेका छन् । मुलुकका सबै कम्युनिष्ट घटकहरुलाई मिलाएर ‘कम्युनिष्ट केन्द्र’ निर्माण गर्न उनी असफल भए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पार्टी एकिकीकरण गरे पनि नेकपा (नेकपा)को अस्तित्व जोगाउन ओली असफल भए, जसले उनको ओज र शक्ति ह्वात्तै घटयो ।
कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार बनायो । तर, सरकारका प्रधानमन्त्री र एकिकृत पार्टीका अध्यक्षका नाताले ओलीले दुई तिहाई बहुमतको सरकार जोगाउन सकेनन् । अनि फुट र विभाजनपछि पनि संसदमा ठूलो दलको रुपमा रहेको एमालेलाई पनि एकढिक्का राख्न सकेनन् । माधव नेपालको समूहलाई पार्टीभित्रै सम्हालेर राख्न उनी असफल भए ।
ओलीले संघीय सरकार मात्र हैन, प्रदेश सरकारहरु पनि बचाउन सकेनन् । स्थानीय सरकारमा ओली गुटको पत्तासाफ भयो । आफ्ना केही बफादारहरुको झुण्ड अघिपछि लगाएर ओली यतिबेला आगामी चुनावमा दुई तिहाईको दुन्दुभी फुकीरहेका छन् । एमालेको महाधिवेशनको तामझाम भव्य छ । तर, यही भव्यता न त एमालेको संगठनमा छ, न विचारमा । जुन गैंडाको सिङ छैन, उसैको नाम ‘एमाले’ झैं भएको छ ।
महाधिवेशनमा पनि ओलीको ‘हुकुम’मा आधारित टिके प्रथा हावी हुनेछ । ओलीका अति बफादार ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमालदेखि महेश बस्नेत र गोकुल बास्कोटासम्मका नेताहरु नै फेरि पनि नेतृत्वमा आउने हो । बालकोट नै एमाले हो ।
माओवादी केन्द्र छाडेर आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र लेखराज भट्टजस्ता नेताहरुको अहिले एमालेमा बेहाल छ । बादललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत नपाउने परिस्थिति बनिसकेको छ । ओलीले ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललाई च्याप्नेछन् ।
१० बुँदे सम्झौताको रटान लगाइरहेका घनश्याम भुषालदेखि भीम रावलहरु त ओलीका लागि झड्केला सन्तान सरह नै भइहाले । विचरा भीम रावल ! वरिष्ठ उपाध्यक्षको च्याँखे थाप्दै सभापतिमै उठ्ने घोषणा गरेका छन् ।
ओलीका अनन्य पात्र महेश बस्नेतले सचिवमा उठने दुन्दुभी फुकीसकेका छन् । ओलीको कृपाबाट महेश नै सचिव नहोलान् भन्न सकिन्न । यही पदका दाबेदार मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीजस्ता पूर्व माकेका नेता पाखा पर्नेछन् ।
अझ, ओलीकै निकट मानिने भानुभक्त ढकाल, लालबाबु पण्डित, शेरधन राई, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठहरुको पनि यसपाली हालत खराब हुँदैछ । एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट मुलतः ओली सर्वसत्तावाद नै अघि बढनेछ । एमालेबाट नयाँ कुनै आशलाग्दो योजना अघि सारिनेछैन । ओलीको दबदबा सहन नसक्नेहरु कोही माधव नेपालतिर, कोही प्रचण्डतिर लाग्नेछन् ।
प्रचण्डको अवसरवाद उस्तै
माओवादी केन्द्र (माके)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अवसरवादी रवैया चाहिँ कायमै रहनेछ । माकेको न त तत्काल महाधिवेशन हुनेछ, त न कसैले प्रचण्डको विकल्प खोज्नेछ । चीनमा सि चिन फीङ झैं माकेमा प्रचण्ड पनि आजीवन अध्यक्ष हुन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका यतिबेला शक्तिहरुबीच फुटाऊ र लाभ लेऊमै सीमित छ । सग्लो एमाले फुटाउन उनी सफल भइहाले । अब कांग्रेसभित्र पनि खेल्न खोज्दैछन् । हालै रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति प्रधानमन्त्री देउवालाई काम गर्न नदिने चलखेलकै एक कडी हो र यसमा प्रचण्डको रणनीतिक स्वार्थ छ भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ ।
प्रचण्ड सकेसम्म आगामी चुनावमा कांग्रेस र नेकपा (एस)सँग गठबन्धन गरेर अहिलेभन्दा ज्यादा शक्ति संचय गर्न चाहन्छन् । एमालेलाई भित्तैमा पुर्याउने, माधव नेपाललाई साइजमा राख्ने, कांग्रेससँग मिलेर अर्को पटक पनि सरकारमा सयर गर्ने प्रचण्डको दाउ छ ।
हुन त प्रचण्डको दाउ भनेको संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुने हो । तर, जनस्तरमा उनको त्यो हदसम्मको लोकप्रियता देखिँदैन । अतः उनी भारत, अमेरिका आदि शक्ति राष्ट्रलाई रिझाएर त्यसखालको परिस्थिति मुलुकमा सिर्जना गर्न चाहन्छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुलुकमा आवश्यक छ । स्थिरताका लागि यो अचुक उपाय हो । प्रचण्डको जोडबल पनि यसैमा छ । तर, प्रचण्डको समस्या भनेको उनी लोकप्रिय छैनन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन उनलाई हम्मेहम्मे छ । किर्तिपुरमा त उनी हारेकै हुन् । मधेशमा पनि हारीसकेका उनलाई कसोकसो जिताइयो ।
अब उनको आँखा चितवनमा परेको छ, जहाँ मतपत्र च्यातचुत पारेर भए पनि छोरीले झैं चुनाव जित्नसकिने माहौल बनाउन सकिन्छ । तर, एमालेले चितवनमै महाधिवेशन आयोजना गरिदिएर प्रचण्डको उछित्तो काढदैछ । त्यहाँ प्रचण्डलाई बदनाम गर्न ओलीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् ।
यही बुझेर अचेल प्रचण्ड बारम्बार चितवन पुगिरहेका छन् । आफुलाई सिध्याउन एमालेले चितवनमै महाधिवेशन आयोजना गरेको भन्दै रुन्चे बोली पनि बोलीरहेकै छन् । चितवनमै एमालेले डेरा जमाएपछि प्रचण्डको तनाव अचेल बढदै गएको छ, जुन उनको बोलीमै झल्किन्छ।
Previousमाछापुच्छ्रे बैंकको सहयोगमा नारायणहिटीमा मोबाईल लकरको व्यवस्था
Nextनेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो यात्रामा
अब पेट्रोल पम्पसम्बन्धी नयाँ नियम लागु हुने
१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ११:१७
थप १५०३ जनाले जिते कोरोना, कतिमा देखियो संक्रमण ?
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार १६:३३
‘दास्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेलाई हराउँछौँ’ : रामशरण महत
९ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ११:०२
स्वेच्छारी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रतिपक्षी दलको उद्घोष
१५ बैशाख २०७७, सोमबार १८:३४